Hambalyo Shacabka Soomaaliyeed Sanad-guuradii 26ka Juune-
Lasanod Online. Tuesday, June 26, 2012
Muqdisho,(lasanod Online)- Madaxda DKMG Soomaaliya ayaa waxay hambalyo ku aaddan 26ka Juun, oo ahayd markii ugu horreysay..
ee calan Soomaaliyeed la suro ciidda Soomaaliya u diray guud ahaan shacabka Soomaaliyeed, iyagoo u rajeeyay in ciiddan teeda kale ay ku gaaraan nabad iyo barwaaqo.
Madaxweynaha Soomaaliya, Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo dalka dibadda uga maqan ayaa wuxuu shacabka Soomaaliyeed ugu hamblayeeyay guul iyo horumar, isagoo sheegay in sannad-guuradaan ay kusoo beegantay xilli ay wadahadallo u billowdeen Soomaaliya iyo Somaliland.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya, Shariif Xasan Shiikh Aadan ayaa isaguna u diray hamblayo taas la mid ah shacabka Soomaaliyeed, isagoo si weyn uga hadlay wadahadallada u billowday Soomaaliya iyo Somaliland, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyay inay noqdaan kuwo mira-dhala.
Madaxda Soomaalida ayaa waxay wadahadallada billowday ee u dhexeeya Soomaaliya iyo maamulka Somaliland ku tilmaameen kuwo waddada u xaadhaya in midnimada Soomaaliya ay dib u soo laabato.